ASHAMPOO BURNING STUDIO 19.0.1.6.5310 FREE DOWNLOAD - MMEMME NYOCHA - 2019
Ugboro oge bụ os ihe a na-ejikọta mgbe arụnyere software, jiri, ma ọ bụ site na usoro ya iji chekwaa subtotals. Dị ka a na-achị, ihe ndị dị otú ahụ na-ehichapụ na-akpaghị aka site na usoro ahụ nke kere ihe okike ha, ma ọ na-eme na faịlụ ndị a nọgidere ma na-agbakọta na diski disk, nke na-emesị mee ka ọ daa.
Usoro nke ihichapụ faịlụ ntanetị na Windows 10
Ọzọkwa, a ga-atụle ya site na nzọụkwụ site nzọụkwụ iji kpochapụ usoro nchịkwa ma wepu oge ntanetị iji Windows OS 10 ngwaọrụ mgbe niile na ọrụ ndị ọzọ.
Usoro 1: Onye nchịkọta ihe
CCleaner bụ ọrụ na-ewu ewu nke ị nwere ike iji obere oge na ihe eji eme ihe n'enweghị ihe ọ bụla. Iji wepu ihe ndị dị otú ahụ site na iji usoro a, ị ghaghị ime usoro ndị a.
Wụnye CCleaner site nbudata ya na saịtị ahụ. Gbaa usoro ihe omume a.
Na ngalaba "Nhicha" na taabụ "Windows" lelee igbe "Faịlụ nwa oge".
Ọzọ, pịa "Nyocha", na mgbe ikpokọta ozi banyere data ehichapụ, bọtịnụ ahụ "Nhicha".
Chere ruo mgbe ị ga-ehicha ma mechie Onye Nchịkọta.
Usoro 2: Advanced Systemcare
Advanced Systemcare bụ mmemme nke na-adịghị mma ka onye nchịkọta ihe dị mfe na iji ọrụ ya. Site n'enyemaka ya, ị nwekwara ike iwepụ data ntanetị. Iji mee nke a, ọ dị gị mkpa imezu iwu ndị dị otú ahụ.
Na isi ihe omume menu, pịa "Faịlụ mbibi".
Na ngalaba "Element" họrọ ihe jikọtara ihe Windows ngwa.
Pịa bọtịnụ ahụ "Ndozi".
Usoro 3: mgbe niile Windows 10 ngwaọrụ
Ị nwere ike ihichapụ PC gị nke ihe ndị na-adịghị mkpa iji Windows OS 10 ngwaọrụ ntanetịime, dịka ọmụmaatụ, "Nchekwa" ma ọ bụ "Cleanup Disk". Iji wepu ihe ndị dị otú ahụ na iji "Nchekwa" mee usoro omume ndị a.
Pịa igodo Nchikota "Meri" ma ọ bụ họrọ "Malite" - "Ntọala".
Na windo na-egosi n'ihu gị, pịa ihe ahụ. "Usoro".
Na windo "Nchekwa" pịa disk nke ịchọrọ ikpochapụ ihe eji eme.
Chere maka nyocha iji mezue. Chọta kọlụm "Faịlụ nwa oge" ma pịa ya.
Lelee igbe dị n'akụkụ "Faịlụ nwa oge" wee pịa "Hichapụ faịlụ".
Nzọụkwụ iji wepụ faịlụ ndị na-adịru nwa oge na ngwá ọrụ ahụ "Cleanup Disk" yiri nke a.
Gaa "Explorer"ma na windo "Kọmputa a" pịa nri diski ike.
Họrọ ngalaba "Njirimara".
Pịa bọtịnụ ahụ "Cleanup Disk".
Chere ruo mgbe a na-atụle data nke enwere ike kachasị mma.
Lelee igbe "Faịlụ nwa oge" wee pịa "OK".
Pịa "Hichapụ faịlụ" ma chere maka ịba uru iji wepụ ohere disk.
Ma ụzọ abụọ na ụzọ nke atọ dị mfe ma onye ọ bụla nwere ike ime ya, ọbụna onye ọrụ PC na-enweghị uche. Tụkwasị na nke ahụ, iji usoro ihe omume nke atọ nwere nchebe, ebe ọ bụ na ọrụ ahụ na-enye gị ohere iweghachite ndabere nke usoro ahụ mgbe ị nụchara.